Phandeeyar 13 rules for startups
၂။ စျေးကွက်သို့ အမြန်ဆုံး မိတ်ဆက်ပါ။ / Launch fast.
စျေးကွက်သို့ အမြန်ဆုံး မိတ်ဆက်ခြင်းကြောင့် စျေးကွက်ထဲသို့ သင်၏ ရောင်းကုန် စောစောရောက်ရှိနေခြင်းထက်၊ စျေးကွက်မှ သင်၏ရောင်းကုန် အပေါ် မည်သို့တုန့်ပြန်မည်ကို နားလည်သိရှိခြင်းက ပိုအရေးကြီးသည်။ စိတ်ကူးပုံဖော် အချိန်ယူ တည်ဆောက်နေမည့်အစား၊ စျေးကွက်၏ တုန့်ပြန်မှုမှတဆင့် သင်၏ရောင်းကုန်ကို မည်သို့မည်ပုံ တည်ဆောက်ရမည်ကို အထိရောက်ဆုံးသင်ယူလိုက်ပါ။
စျေးကွက်သို့ အမြန်ဆုံး မိတ်ဆက်ပြီး အခရာကျသည့် သုံးစွဲသူများနှင့် ထိတွေ့ပါ။
၃။ လုပ်ငန်း စိတ်ကူးပုံစံကို ဆင့်ကဲပြောင်းလဲပါ။ / Let your idea evolve.
စတင်မိတ်ဆက်အပြီး စျေးကွက်မှ တုန့်ပြန်မှုပေါ် မူတည်၍ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုကို အစဉ်ပြုလုပ်ပါ။ Startup ဆိုသည်မှာ ကနဦး စိတ်ကူးရှိသည့် လုပ်ငန်း စိတ်ကူးပုံစံကိုသာ အကောင်အထည်ဖော်နေခြင်း မဟုတ်ပါ။ ယခု စာရေးနေသလိုပါပဲ အဓိက စိတ်ကူးစိတ်သန်းများသည် ​ရေးနေသည့် အချိန်မှသာ ပုံပေါ်လာတတ်ပါသည်။
အမြန်ဆုံး စတင်မိတ်ဆက်ပြီး စျေးကွက်အရ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲ၍ စျေးကွက်ဖောက်ပါ။
၄။ သုံးစွဲသူတွေကို နားလည်စာနာပါ။ / Understand your users.
Startup ၏ ဓန တန်ဖိုးကို တိုးတက်စေသည့် အချက် ၂ ချက်မှာ သုံးစွဲသူများရရှိသည့် အကျိုးကျေးဇူး ပမာဏ နှင့် သုံးစွဲသူဉီးရေ ပမာဏ ဖြစ်သည်။ Startup သည် ပထမ အချက်ကို ဖော်ဆောင်နိုင်ရန် ထိမ်းချုပ်နိုင်စွမ်း ပို၍ရှိသည်။ ဒုတိယ အချက်သည်လည်း ပထမ အချက်တွင် ပေးစွမ်းနိုင်သည့် အကျိုးကျေးဇူးပေါ်တွင် မူတည်သည်။ သင် ရည်ရွယ်ဉီးတည်ထားသည့် သုံးစွဲသူများကို နားလည်စာနာ နိုင်မှသာ သူတို့လိုအပ်သော အကျိုးကျေးဇူးများကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်မည်။ ထို့ကြောင့်လည်း အောင်မြင်သော startup များသည် တည်ထောင်သူများကိုယ်တိုင် လိုအပ်သည့် အကျိုးကျေးဇူးများကို ပေးစွမ်းနိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ ဖြစ်ကြသည်။
သုံးစွဲသူများကို နားလည်စာနာပြီး၊ ၎င်းတို့ အမှန်လိုအပ်သည်များကို ဆောင်ရွက်ပေးပါ။
၅။ အမာခံ အားပေးသုံးစွဲသူများ ကြိုက်နှစ်သက်အောင် ဆောင်ရွက်ပါ။ / Better to makeafew users love you thanalot ambivalent.
သင်၏ ရောင်းကုန်ကို သုံးစွဲသူ အများကြီး ကြိုက်နှစ်သက်လျှင် အကောင်းဆုံးပေါ့၊ ဒါပေမယ့် လက်တွေ့ အစမှာ လုပ်ဆောင်ဖို့ခက်လိမ့်မည်။ ကနဉီး သင့်မှာ ရွေးစရာ ၂ ခု ရှိသည်။ ပထမ တစ်ခုကတော့ လူနဲစု တစ်စုက သင်၏ ရောင်းကုန်ကို နှစ်သက်လက်ခံအောင် လုပ်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်ပြီး၊ ဒုတိယ တစ်ခုကတော့ ရည်ရွယ်ထားသည့် သုံးစွဲသူ တစ်စုလုံးက အစိတ်အပိုင်းလိုက် လက်ခံအောင် လုပ်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ပထမ တစ်ခုကို ရွေးလိုက်ပါ။ အစပိုင်းတွင် အားလုံးအကြိုက်လိုက်လုပ်ရန် လွန်စွာခက်ခဲမည်ဖြစ်ပြီး၊ သုံးစွဲသူ အစိတ်အပိုင်းတစ်စုကို အာရုံစိုက်ကာ ထိထိမိမိဆောင်ရွက်ရန် ပိုဖြစ်နိုင်သည်။
ဒွိဟဖြစ်စရာ အရေအတွက် အစား၊ အရေအသွေးရှိသည့် အမာခံ အားပေးသုံးစွဲသူများ ကြိုက်နှစ်သက်အောင် ဆောင်ရွက်ပါ။
၆။ အံ့သြသွားလောက်အောင် ကောင်းမွန်သည့် ဝန်ဆောင်မှုပေးပါ။ / Offer surprisingly good customer service.
လုပ်ငန်းကြီးများသည် စျေးကွက်ရရှိမှု အနေအထားအရ သုံးစွဲသူများအတွက် ဝန်ဆောင်မှုများကို အများအားဖြင့် လိုသည်ထက် ပို၍မပေးကြပေ။ ယခုရရှိနေသော ဝန်ဆောင်မှုများထက် ပို၍သာလွန်သော အတွေ့အကြုံကို ပုံဖော်ကြည့်ပါ။ သင်၏ သုံးစွဲသူများကို ကောင်းမွန်သည်ထက်၊ အံ့သြသွားလောက်အောင် ဝန်ဆာင်မှုပေးပါ။ သူတို့ကို ပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပါ။ သင့်ကို အမြဲအမှတ်ရနေလိုက်မည်။ Startup ၁ ခု၏ ကနဦးကာလတွင် ကောင်းမွန်သည့် ဝန်ဆောင်မှုသည် ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းသာ မဟုတ်ပဲ၊ သုံးစွဲသူနှင့်ပါ ထိတွေ့ဆက်ဆံခွင့်ရသည့်အတွက် သုံးစွဲသူများကို ပိုမိုနားလည်စာနာနိုင်သည်။
သုံးစွဲသူများကို ပိုမိုနားလည် သိရှိပြီး၊ ၎င်းတို့ စိတ်ထဲတွင် စွဲမှတ်နေရန် အံ့သြလောက်သည့် ဝန်ဆောင်မှုပေးပါ။
၇။ ဖြစ်ရမည့် အရာများကို တိုင်းထွာပါ။ / You make what you measure.
သင်သည် သင် တိုင်းထွာနေသည့် အရာများကို ပို၍ကောင်းအောင် လုပ်လေ့ရှိသည်။ သုံးစွဲသူဦးရေကို တိုးပွားစေချင်ပါက၊ နံရံပေါ်တွင် နေ့စဉ်ရေးမှတ်လိုက်ပါ။ တက်သည့် အခါ သင် ဝမ်းသာလိုက်မယ်၊ ကျသည့် အခါ သင် ဝမ်းနည်းလိုက်မယ်။ ခဏအကြာမှာတော့ ဘာတွေကြောင့် တိုးတက်ရတာလဲ၊ ဘာတွေကြောင့် ကျရတာလဲ၊ သင် အလိုလို သတိထားမိလာလိမ့်မည်။ တိုးတက်စေသော အကြောင်းတရားများကို ပိုလုပ်ပါ၊ ကျစေသော အရာများကိုတော့ ရှောင်ပါ။ ဘာတွေကို သင် တိုင်းထွာမည်ကိုတော့ အသေအချာ စဉ်းစားဆင်ခြင် ရွေးချယ်ပါ။
သင့်လုပ်ငန်းအတွက် အခရာကျသည့်၊ ဖြစ်ရမည့်အရာများကို တိုင်းထွာ၍ ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။
၈။ ခြိုးခြံ ချွေတာပါ။ / Spend little.
Startup ၁ ခု တည်ထောင်ရာတွင် စရိတ်စက သက်သာရန် အရေးကြီးသည်။ Startup အများစုသည် သုံးစွဲသူများ လိုချင်သည့် ရောင်းကုန်ကို မတည်ဆောက်နိုင်သေးခင် အရင်းအနှီး ကုန်ဆုံးပြီး ကျရှုံးတတ်ကြသည်။ စျေးကွက်နှင့် ကိုက်အညီအောင် လျှင်လျှင်မြန်မြန် ဆင့်ကဲပုံဖော်ရာတွင် စရိတ်စက သက်သာမှသာ ရေရှည်အဆင်ပြေနိုင်မည်။ ခြိုးခြံ ချွေတာပြီး၊ အရင်းအမြစ် အနည်းငယ်ဖြင့် ဖြစ်အောင်လုပ်သည့် ဓလေ့သည် လေ့ကျင့်ခန်း ပုံမှန်လုပ်သည့် လူငယ်များကဲ့သို့ startup များကို လျင်မြန်သွက်လက် နေစေမည်။
စျေးကွက်နှင့် ကိုက်ညီသည်အထိ စရိတ်စက သက်သက်သာသာဖြင့် လျင်လျင်မြန်မြန် ဆောင်ရွက်ပါ။
၉။ မွင်းခါးစားလောက်သည့် အမြတ်ရှာပါ။ / Get ramen profitable.
“မွင်းခါးစားလောက်သည့် အမြတ်” ဆိုသည်မှာ တွဲဖက်တည်ထောင်သူများ ရှင်သန်ရန် လိုအပ်သည့် အနည်းဆုံး ကုန်ကျစရိတ် ပမာဏ ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ထိုသို့ အမြတ်ငွေရရှိရန် ကြိုးပန်းမှုသည် ရေရှည်မျှော်မှန်းသည့် စီးပွားရေးပုံစံကို ပုံဖော်ခြင်းမဟုတ်ပဲ၊ startup က ရင်းနှီးမြှပ်နှံသူများ ရှာနေသည့်အခိုက် အနေအထားကောင်းရန်သာ ဖြစ်သည်။ ဆက်လက် ရှင်သန်ရန် ပူပင်စရာ မလိုတော့သည့်အတွက် ရင်းနှီးမြှပ်နှံသူများနှင့် ညှိနှိုင်းရာတွင် သူတို့၏ ပညာပြမှုကို မှုစရာမလိုပဲ၊ သင့်ဘက်မှ သင့် startup နှင့်ကိုက်ညီမည့် ရင်းနှီးမြှပ်နှံသူ၊ ရင်းနှီးမှုပုံစံကို အချိန်ယူ ညှိနှိုင်းနိုင်မည်။ ထို့ကြောင့်လည်း သင့်အဖွဲ့၏ စိတ်ဓါတ်ကို မြင့်မားနေစေမည်။
မွင်းခါးစားလောက်အောင်ရှာပြီး ခြိုးခြံ ချွေတာခြင်းဖြင့် သင့်လုပ်ငန်းကို တိုးချဲ့ပါ။
၁၀။ အာရုံနောက်စေသည့် အရာများကို ရှောင်ပါ။ / Avoid distractions.
Startup များကို ကျရှုံးစေသည့် အဓိကအချက်မှာ ပင်မလုပ်ငန်းစဉ်မှ သွေဖည်စေသည့် အာရုံနောက်သည့်အရာများဖြစ်သည်။ အဆိုးဆုံးအရာမှာ အပိုဝင်ငွေရသည့် အရာများဖြစ်သည်။ Startup သည် ရေရှည်အကျိုးအတွက် လက်ရှိတွင် အချိန်နှင့်လုပ်အားကို စိုက်ထုတ်ပြီးလုပ်ရသောကြောင့် သင်သည် အခြား ဝင်ငွေရသည့်လုပ်ငန်းများကို တပြိုင်တည်း လုပ်နေပါက၊ သင်၏ startup ကို ပေးသင့်သည့် အချိန်များထဲမှ ဖဲ့ပေးနေရမည်ဖြစ်သည်။ နောက်ထပ် အာရုံနောက်သည့် အရာကတော့ ယခု startup အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှာရခြင်းပဲဖြစ်သည်။ ၎င်းကို လျှော့ချနိုင်မှသာ သင့်လုပ်ငန်းကို အာရုံစိုက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရဖို့ သင့်လုပ်ငန်း အောင်မြင်နေဖို့လိုပြီး၊ သင့်လုပ်ငန်း အောင်မြင်မှုမရှိပဲ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှာနေလည်း ထူးမည်မဟုတ်ပေ။
သင့်လုပ်ငန်းကို တစိုက်မတ်မတ် တိုးတက်အောင် လုပ်ဆောင်ဖို့ အခြား အာရုံနောက်စေသည့် အရာများကို ရှောင်ပါ။
၁၁။ စိတ်ဓါတ် မကျပါနှင့်။ / Don’t get demoralized.
Startup တွေကို ချက်ချင်း ကျရှုံးစေတာကတော့ ငွေကုန်သွားတာဖြစ်ပေမယ့်၊ နောက်ကွယ်က အကြောင်းအရာကတော့ အာရုံစိုက်မှု အားနဲလို့ပဲဖြစ်ပါသည်။ တစ်ချို့ ကျရှုံးမှုတွေက ကျွမ်းကျင်မှု အားနဲခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပြီး၊ တစ်ချို့ကတော့ ကျွမ်းကျင်မှုရှိသော်လည့်း စိတ်ဓါတ်ကျသွားခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ Startup တစ်ခု တည်ထောင်ခြင်းသည် စိတ်ဓါတ်အပေါ် ဖိစီးမှုများပါသည်။ လေးလံသည့် သေတ္တာတစ်ခုကို မ သည့်အခါ ဒူးနှင့်ခါးကို သတိပြုသလိုပါပဲ၊ အခက်အခဲတွေကြုံလာခိုက် စိတ်ဓါတ်ကို သတိထားပြီး တင်းထားပါ။
ဖိစီးမှုတွေကို ထုံးစံအဖြစ် လက်ခံထားပြီး၊ သင့် စိတ်ဓါတ်ကိုမကျ ပါစေနှင့်။
၁၂။ အရှုံး မပေးပါနှင့်။ / Don’t give up.
သင် စိတ်ဓါတ်ကျနေသည့်တိုင် အရှုံးမပေးပါနှင့်။ သင် အရှုံးမပေးပဲနှင့် ရှေ့ဆက်သွားခြင်းဖြင့် အဝေးကြီး ဆက်လက်သွားနိုင်လိမ့်မည်။ Startup လုပ်သည့်အခါ လုံ့လစိုက် ရှေ့သို့တွန်းကာ၊ လုပ်ငန်းပုံစံကို စျေးကွက် အနေအထားအလိုက် ဆင့်ကဲပြောင်းလဲ တိုးတက်အောင်လုပ်နေခြင်းဖြင့် အောင်မြင်မှု လမ်းစကို ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
အရှုံးမပေးပဲ ရှေ့ဆက်လျှောက်လမ်းပြီး စျေးကွက်နှင့်ကိုက်သည့် လုပ်ငန်းပုံစံကို ဖော်ဆောင်ပါ။
၁၃။ ညှိနှိုင်းမှုတွေ ကျရှုံးတတ်သည်။ / Deals fall through.
Startup လုပ်သည့်အခါ ရင်းနှီးမြှပ်နှံခြင်း အတွက်ဖြစ်စေ၊ အရောင်းစာချုပ် အတွက်ဖြစ်စေ ညှိနှိုင်းမှုပေါင်းများစွာ လုပ်ရတတ်ပါသည်။ ထို ညှိနှိုင်းမှုများသည် သေချာရေရာခြင်းမရှိသလို၊ အချိန်အားဖြင့် ကြာလေ့ရှိပါသည်။ ညှိနှိုင်းမှု အများကြီးထဲမှ အနည်းအကျဉ်းသာ ပြီးမြောက် အောင်မြင်တတ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ညှိနှိုင်းမှုတွေအပေါ် စိတ်မနှစ်မထားပါနှင့်၊ သင့်အတွက် အရေးကြီးသည့် အလုပ်များကိုသာ အာရုံစိုက်လုပ်ဆောင်ပါ။
ကျရှုံးလေ့ရှိသည့် ညှိနှိုင်းမှုတွေအပေါ် မျှော်လင့်ချက် အများကြီးမထားပါနှင့်။
ဆိုတော့ကာ အပေါ်က အချက် ၁၃ ချက်ထဲက ဘယ်ဟာ အရေးကြီးဆုံးလို့ သင်ထင်သလဲ။
သုံးစွဲသူတွေကို နားလည်စာနာသည့် အချက်က အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါသည်။
Startup ၏ ဓန တန်ဖိုးကို တိုးတက်စေသည့် အချက် ၂ ချက်မှ၊ သင်အလုပ်နိုင်ဆုံး အချက်မှာ သင့် ဖောက်သည်တွေ လိုအပ်သော အကျိုးကျေးဇူးများကို ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ သူတို့ ဘာကို တကယ်လိုအပ်နေသလဲကို ဂဃဏန သိဖို့ရာ လွန်စွာခက်ခဲပြီး၊ သင် သိရှိပြီးပါက အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ လွယ်ကူသွားပါလိမ့်မည်။
သုံးစွဲသူတွေကို စာနာနားလည်လိုက်သည်နှင့် အပေါ်က ၁၃ ချက်ထဲမှ ထက်ဝက်လောက် ပြီးမြှောက်သွားပါလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့် စျေးကွက်သို့ အမြန်ဆုံး မိတ်ဆက်ပြီး၊ သုံးစွဲသူတွေနှင့် ထိတွေ့ပြီး၊ ၎င်းတို့ကို နားလည်အောင် ကြိုးစားပါ။ သင့် လုပ်ငန်း စိတ်ကူးပုံစံကို သုံးစွဲသူတွေကို နားလည်စားနာခြင်းဖြင့် ဆင့်ကဲပြောင်းလဲပါ။ သုံးစွဲသူတွေကို ကောင်းမွန်သည့် ဝန်ဆောင်မှု ပေးခြင်းဖြင့် သုံးစွဲသူတွေနှင့် ပိုမိုထိတွေ့ပြီး၊ ၎င်းတို့ကို ပိုမို နားလည်စာနာနိုင်သည်။ နားလည်စာနာပြီး သင့် သုံးစွဲသူတွေ စိတ်ကြိုက် ဖန်တီးပေးနိုင်ပါက သင့်အပေါ် အားပေးထောက်ခံမှု ပိုမိုရရှိလာလိုက်မည်။
တခြားအရာတွေ သင့်အတွက် အဆင်မပြေဖြစ်နေသည့်တိုင်၊ သင့်ကို အားပေးထောက်ခံနေသည့် ဖောက်သည် ၁၀ ဦးက သင့်ကို ရှေ့ဆက်သွားနေနိုင်ဖို့ ခွန်အားတွေပေးနေမှာပါ။
The content and images of this article was translated and referenced from: link, link